Takelaka misy takela-baravarana mitafo mpanjakavavy
Amin'ny ankapobeny, ny fotoana ilaintsika eritreretina dia ny fomba hahitana ny kidoro mety sy tsara. Na izany aza, na iza na iza nividy farafara fandriana dia miombon-kevitra amin'ny maha-zava-dehibe azy io izay matetika mila ezaka be loatra. Miatrika fanaka maro be sy hita toy izany, be dia be ny hevitra tokony horaisina. Azo antoka, ho an'ny zana-pandriana, ny karazany dia mitovy amin'ny fandriana hatramin'ny halehibe ka hatramin'ny fitaovana. Noho izany, raha mahatsapa fisalasalana ianao na sarotra aminao ny manapa-kevitra hoe iza no tokony ho safidy voalohany amin'ny fomba ahoana, ahoana ny mianatra an'ity takelaka fandriana mpanjaka ity?
Ny lohan'ny farafara mpanjakavavy dia saron-doha feno ravina dia ny fehezan-teny tonga lafatra napetraka amin'ny efitrano fatoriana misy fomba isan-karazany. Ny famaranana vita amin'ny volon'ondry miloko marevaka ary ny endriny marevaka dia manome endrika tsara kokoa sy miaro azy. Ny sisin'ny sisin-damban-tànana tsy mitongilana dia mamorona endrika kanto sy mahafinaritra izay mifanaraka tsara amin'ny takelaka mahazatra vita amin'ny volony. Manohana tanteraka ny kidoroo ny taolam-pilalaovana. Ireo takelaka hazo voahodidina dia afaka manamboatra ny kidoro amin'ny fotony. Ny tongotra am-pandriana maharitra sy mitafy lamaody dia mamorona endrika ho fijery marobe izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fomba sy ny safidiny. Izay rehetra ilainao hametrahana haingana sy mora ity farafara fandriana ity dia tafiditra ao anaty efitrano iray. Sambo mifono haingana sy azo antoka ao anaty boaty iray, marina mankany amin'ny trano fitahirizanao.
Type: Fanaka an-trano, efi-trano
Material: Lamba; Metal;
Bika Aman 'endrika: Fanaka ankehitriny
Anaran'ny vokatra: Saron-doha voaravaka amin'ny farafara mpanjaka
Laharana maodely: BF-AU01-04
asa: Toeram-pandriana fisakafoanana
lafiny(cm): 137L * 190W
Haben'ny fonosana(cm): 139L * 192W